20 Van Peirse vs 10 Rooney oo Caawa iska kaashan doona Kulanka Everton ee Bilowga u ah Xili ciyaareedka Naadiga Man utd
Caawa waxaa ku balansan Ciyaar xiiso Badan Kooxaha Everton vs Man Utd waxaana Kulankaan iska kaashan doona Dhinaca Weerarka Kooxda Man Utd 2 weeraryahan ee xili ciyaareedkii Tagay ee 2011-2012 kala galay Kaalimaha 1 iyo 2 ee dhinaca Gooldhalinta Van Peirse vs Rooneey.
Xidiga u dhashay Hoolan kana soo Tagay Kooxda Arsenal Markii u wax koob ah la qeybsan waayay ayaa Rajeynaya inuu Guulo iyo Koobab la qeybsado Kooxdaan Ruugcadaaga Freguason uu wato waxaan uu caawa ka dhinacCiyaari doona aWeeraryahahnka Reer England sida weyna looga qadariyo Naadiga Man utd iyo Xulka Ingiriiska Wayne Rooneey.
Iskaashiga Caawa dhex mari doona 2 xidig waxaa uu Halis GHalin karaa Difaaca Everton oo Caawa uu heysto war Cusub iyo weerar Xoogan.
Hadaba Van Peirse Kulankiisa ugu Horeeya ee Man utd oo indha ay ku jeedaan il Gaar ahana uu ku eegayo Macalinkiisii hore ee Kooxda Arsenal Wanger ma ku guuleysan doonaa.
Horyaalak Ingiriiska 2012-2013 oo ku Bilowday jawi Xamaasadleh ayaa waxaa shalay galab Guulo ka gaaray Kulankoodii ugu Horeeyay Kooxaha Cheslea vs Man city oo uga Kala Badiyay Wigan iyo Southampton 2-0 iyo 3-2 Dirqi ah waxaan aad loola Fajacay sida Kooxda heerka 2 ka timid ee Southampton isag Celisay Man city oo ku sigatay inay dhibic kala hoyato garoonkeeda Bal;se uu Badbaadiyay weeraryahanka Reer Franca Samir Nasri oo u qaata lambarka 11.
Kooxaha Liverbool.Totenham,iyo Aston vila ayaa afka Ciida loo daray,sidoo kale Arsenal ayaa la qabtay Kulmadii laciyaaray Sabtigii waxaana Horyaalka Goolal ku Hogaaminaya Fulham iyo Swansea oo min 5-0 u Xambaariyay Naadiyada Norwich iyo QPR.
Axmed Maxamed Cabdulle;Uurdoox'